UKrakow ubamba umsitho we-2022 weNkomfa yaMazwe ngaMazwe kunye noMbutho weNgqungquthela
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zasePoland » UKrakow ubamba umsitho we-2022 weNkomfa yaMazwe ngaMazwe kunye noMbutho weNgqungquthela
Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • abantu • Iindaba zasePoland • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Inkongolo ye-2022 ICCA iza kuthi ihambisane nesikhumbuzo se-10th sobulungu be-Kraków kwi-International Congress kunye ne-Convention Association (ICCA).
I-61st ICCA Congress nge-13-16 Novemba 2022, iya kuthatha amalungu ayo esixekweni esikwintliziyo yaseYurophu ekwaliziko lenkcubeko, ubugcisa kunye nesayensi yamazwe aphesheya.
Kraków, IPoland yindawo yokuphonononga iinkulungwane zembali ecaleni kweempawu zobugcisa zangoku.
IKraków ibonisa ngokucacileyo ukuzibophelela kwiimpawu ezimbini ze-ICCA: ukusebenza kunye nokwamkela izinto ezintsha.
61yokuQala I-International Congress kunye ne-Convention Association (ICCA) ICongress nge-13-16 ngoNovemba 2022, iya kuthatha amalungu ayo esixekweni esisembindini weYurophu ekwaliziko lenkcubeko, ubugcisa kunye nesayensi yamazwe aphesheya. Kraków, IPoland yindawo yokuphonononga iinkulungwane zembali ecaleni kweempawu zobugcisa zangoku. Unyaka ngamnye isixeko esifikeleleka ngokulula samkela iminyhadala yenkcubeko kunye nezifundo, kunye neentlanganiso zeshishini.
2022 I-ICCA ICongress nayo izakuhambelana nesikhumbuzo seminyaka eli-10 IngcaUbulungu kwi-International Congress kunye ne-Convention Association (ICCA). Ukusebenzisana kuyeyona nto iphambili ekukhuleni nasekuphumeleleni kukaKraków kule minyaka ilishumi idlulileyo.
Umzekelo, i-KRAKÓW NETWORK idibanisa phantse abantu abangama-400, abamele phantse ama-200 amaziko kwaye inamaqela ama-5 emfundo. Okwangoku, i-Kraków yeLebhu yexesha elizayo inoxanduva lokuzisa iintlanganiso kufutshane netekhnoloji yeziganeko ezintsha. Uthungelwano olomeleleyo lwentsebenziswano alwakhiwanga apha ekuhlaleni kuphela kodwa nakwilizwe liphela, kubandakanya nePoland Convention Bureau yoMbutho Wezokhenketho ePoland, iiOfisi zeNkongolo zengingqi ezili-16, imibutho yeshishini lesizwe, umanyano lwendawo, kunye nokuthatha inxaxheba kwiNkqubo yeNgqungquthela yeNkongolo. UKrakó ukwalilungu leNtengiso yeziXeko zaseYurophu.
"Ingca ibonisa ngokucacileyo ukuzibophelela kwiimpawu ezimbini eziphambili ze-ICCA: ukusebenza kunye nokwamkela izinto ezintsha. Ngesi sizathu, isixeko sasilukhetho olucacileyo kwinkomfa yonyaka ozayo. Abathunywa beNkongolo ye-2022 ye-ICCA banokulindela amava eentlanganiso angenamthungo adibanisa indawo ekumgangatho wehlabathi kunye nombutho womsitho, "utshilo u-CEO we-ICCA uSenthil Gopinath.
I-ICCA Abathunywa beCongress baya kudibana e IZiko leNkomfa le-ICE Kraków, ishishini kunye nenkcubeko yeflegi yesixeko. Ibekwe ngokulula embindini, ibambe imisitho emininzi ekumgangatho wehlabathi kunye neyantlukwano enje ngeseshoni yama-41 yeKomiti yeHlabathi ye-UNESCO ye-15 yeNkongolo yeHlabathi ye-OWHC kunye neNtlanganiso yoQoqosho lwaMehlo oVulekileyo yonyaka.
“Inkongolo ye-ICCA sesinye seziganeko ezibalulekileyo kwishishini leentlanganiso kwihlabathi. Qho ngonyaka kuzisa phantse iwaka leengcali ezinamava ekuququzeleleni iinkomfa zamazwe kunye neenkongolo: iindawo ekuyiwa kuzo, iindawo, iiPCO kunye nemibutho. IPoland izakuyisingatha okokuqala, into leyo engqina ukuba imeko yethu sele ikho, kwaye kwelinye icala idala amathuba amahle okuphuhla kwayo ”kugxininisa uSodolophu wase Kraków Jacek Majchrowski.
“Njengokuba amaqondo okugonya eqhubeka esanda kwaye umhlaba wethu uqala ukuvuleka kancinci kancinci, siyavuya ukubona ukubuya kweziganeko ezenzeka ebantwini. IKrakow ibonelela ngendawo yokuhlangana efikelelekayo kumalungu amaninzi e-ICCA kwaye isixeko ngokungathandabuzekiyo siza kubonisa eyona nto ifunekayo kushishino lwethu kwiintlanganiso zemibutho yamanye amazwe, utshilo uGopinath.
Oktobha 20, 2021 kwi-13: 27
umfanekiso weskrini شات عراقنا صوتي umfanekiso weskrini